I-NARA HOUSE (Bangued, Abra)I-WIFI YAMAHHALA
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguRebecca
Yakhelwe emazantsi enduli. Yiza ube namava elizwe le-vibe kwindlu yaseNara apho umoya upholileyo, indawo engqongileyo iluhlaza kwaye abantu bashushu. Sikumizuzu eli-10 kude entliziyweni yeBangued, Jollibee, Chowking, McDonalds kunye neMarike yoLuntu. Iindlela ezikhokelela endlwini zisanda kulungiswa nto leyo eyenza ukuba kube lula ukufikeleleka kwiimoto ezinkulu.
Indlu enamagumbi amabini, isilingi evundiweyo, amagumbi ama-2 akhethiweyo ngendawo yokuhlala enomoya okanye evulekileyo. Igumbi lendlovukazi line-air conditioning kunye ne-1 queen bed kunye nebhedi eyongezelelweyo, elinye igumbi livulekele umoya kunye ne-fan kunye ne-bunk bed engakwazi ukuhlalisa iindwendwe ezi-3 (ibhedi ye-bunk inebhedi yokukhupha).
Igumbi lokuhlambela eli-2 1 phantsi kwinqanaba eli-1 phezulu, linendawo yokuhlala epholileyo, itafile yokutyela eyi-8, indawo yokupaka ikhona. Iindwendwe zinokusebenzisa ikhitshi ukupheka. Ifenitshala zenziwe kwi-narra, isilingi yi-narra kungoko igama lendlu yakwaNara.
Wamkelekile kwikhaya lika-Abra leengxangxasi zeKaparkan, kunye ne-39 ngaphezulu.
INara House yiyure enye nemizuzu eli-15 ukuya eVigan.
Imizuzu engama-40 ukusuka kwindawo yokujonga iDanglas. Imizuzu eyi-8 ukusuka kwiCasamata Hills apho uphawu "Ndiyamthanda uAbra" lukhona, indawo efanayo yokubona umbono olungileyo wedolophu yaseBangued kunye nentaba edumileyo yobuhle bokulala.
Imizuzu emi-5 ukuya kweli-10 ukuya kwidolophu yaseBangued ngokufanelekileyo okanye kwipoblacion, imizuzu emi-5 ukuya kweli-10 ukuya eJollibee, eMc Donalds, eChowking, eMang Inasal.
Sibekwe ngobuchule endulini, induli iyasahlula kwisiphithiphithi kunye nokuphithizela kweBangued proper.
I live in Arizona, USA I love airbnb so much that I decided to convert our house in the Philippines into one.
Umnakekeli wendlu uya kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho.